Tartan uu sameeyanayo raadiye Soomaali ah oo dhiiri-galinaya dulqaadka iyo barshada inta lagu jiro bisha Ramadaan - Sabahionline.com
Tartan uu sameeyanayo raadiye Soomaali ah oo dhiiri-galinaya dulqaadka iyo barshada inta lagu jiro bisha Ramadaan
Radio Muqdisho ayaa bilaabay tartankiisa sannadlaha ah ee aqoonta guud, taasoo la qabto fiid walba inta lagu jiro bisha Ramadaan kadib xilliga afurka, sidaana waxa Sabtidii (21-kii July) sheegay Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed.
AMISOM oo $4.5 milyan ku bixinaysa hagaajinta nolosha dadka Soomaaliya
Xulashada xubnaha barlamaanka Soomaaliya oo dhawaan soo dhammaanaya, sida uu sheegay guddoomiyuhu
Tartanka oo ay ku loolamayaan kooxo ka kala socda 32 dagmo oo ku yaal daafaha Soomaaliya ayaa waxa uu ka kooban yahay aqoon guud. Intii lagu guda jiray munaasabaddii furitaanka tartanka oo dhacday Jimcihii, ayuu soo jeediyaha Radio Muqdisho waxa uu kooxaha tartamaya ku dhiiri-galiyay in ay muujiyaan dulqaad.
Shirkadda Isgaarsiinta Hormud, oo ah shirkad isgaarsiineed oo ay leedahay Soomaali, xarunteeduna tahay Muqdisho, ayaa maal-galinaysa tartanka, iyo sidoo kale tartan goboleed oo ka socda Radio Shabeelle. Tartanka ka socda Radio Shabeelle ayay kooxdii ku guulaysta waxa ay heli doontaa abaal-marinno gaaraya $3,000 oo doollar.
Ula-jeeddada tartanka ayaa ah in la dhaq-dhaqaajiyo horumarka iyo korriinka diimeed iyo kan aqooneed ee dhallnyarada iyada oo abaal-marinno lagu siinayo waxbarashada, sida ay sheegtay Shabakadda Warbaahinta Shabeelle.